Ihe nhicha ikuku na-arụ ọrụ n'ezie?
Orieslọ ọrụ na ebe obibi
Lọ Ọrụ Mmụta
Ugbo nke Oge A
Usoro Ọgwụ VOC
Ikuku Ijikwa ikuku
Roomlọ Dị Ọcha Ikuku Ikuku
DX Ikuku Ijikwa Unit
Ọhụrụ Ijikwa Unit
Industrial Air Ijikwa Units
Ntụ oyi Rooftop
Ntụ oyi ICT
Roomlọ Dị ọcha HVAC
Ihe eji asa ulo
Ndị na-ere ahịa ọkụ ọkụ
Okpomọkụ Iweghachite Ventilator
Ndị na-ere ọkụ ọkụ
Okpomọkụ mgbapụta Okpomọkụ Iweghachite Ventilator
Ihe Omumu nke Ihe
Ma eleghị anya, ị nwere ihe nfụkasị ahụ. Ma eleghị anya, ị nwetala otu ọtụtụ ịmanye ọkwa gbasara ikuku dị na mpaghara gị. Ikekwe ị nụrụ ya nwere ike inye aka gbochie mgbasa nke COVID-19. N'agbanyeghị ihe kpatara gị, ị na-atụle ịnweta ikukuọcha, ma n’ime ala, ị ga-ajụ onwe gị, sị: Mee ikuku ọchaọrụ? Ha na-ekwe nkwa ikpocha uzuzu, pollen, anwụrụ ọkụ, ọbụlagodi ụmụ nje, mana ha na-anapụta nke ahụ n'ezie, ka ọ bụ na ọ bụ naanị ndị karịrị ọnụ?
Ejiri nhicha ikuku iji melite ogo ikuku n'otu ụlọ. EPA na ọtụtụ ndị dọkịta kwenyere na nchacha ikuku na-enye aka. Karịsịa ma ọ bụrụ na mmetọ n'èzí dị elu, ma ọ bụ na ọ dị oke oyi iji mepe windo gị ka ị wee nwee ikuku ọhụrụ.
"Ebu nje virus, dị ka SarsCoV2 na flu, ndị a nwere ike ịnọ na-akwụsịtụ na ikuku ruo ọtụtụ awa, yabụ ihe nzacha ikuku enweghị ike imerụ ahụ, mana cheta ụmụ irighiri mmiri ahụ nwekwara ike ịdakwasị na-anọdụ ala ebe ahụ," ka Dr. Elliott na-akọwa. "Otu ikuku ọcha ekwesịghị dochie nkpuchi yi, aka saa, iche, ọ bụghị na-ekere òkè na ngwaahịa na sanitizing jikoro." Dị ka CDC si kwuo, tụlee akụkụ ventilashị nke "atụmatụ mkpuchi" iji gbochie mgbasa nke coronavirus.
Ya mere, ụdị ụdị nke nhicha ikuku anyị kwesịrị ịhọrọ ma zere?
Typesfọdụ ụdị ndị na-ehicha ikuku, ozone na-ebunye ozone n'oge usoro nhicha. Ozone bụ ikuku na-enweghị ntụ, nke na-egbu egbu ma na-ejighị n'aka nke nwere mkpụrụ atọ ikuku oxygen na nke ọ bụla n'ime mkpụrụ ndụ ya. Ikuku na-adabara na ikuku elu, mana ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị nke anwụrụ ọkụ mmadụ. Ozone na-ewepụta ihe nhicha ikuku na-ama ụma na-ewepụta ozone gas dị ka atụmatụ iji kpochapụ nje na kemịkal ikuku. Californialọ ọrụ na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na California na-ekwu na ikpughe ozone na-emerụ mkpụrụ ndụ dị na ngụgụ na ikuku. Mmetụta dị na ikpughe na gas nwere ike ịgụnye mkpụmkpụ ume, ụkwara na ume obi. Ndị ọrịa na-arịa ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ndị ọzọ na-egosi ọrịa nwere ike ịnwe mgbaàmà siri ike nke ọnọdụ ndị a n'ihi nsonaazụ ozone.
Ọ ka mma ịhọrọ igwe nhicha nke na-eji ikuku ikuku ikuku.
N’uche, ọtụtụ n’ime ihe nchacha ahụ na - eji nzacha - ma ọ bụ nchikota nzacha na ọkụ UV - iji wepu adịghị ọcha na mmetọ ikuku. Emere ha iji melite ogo ikuku n'otu ụlọ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-ehicha ikuku na-adabere n'iji nzacha nwere ike iwepụ, nke nwere ike dochie ya, nke pụtara na ịkwesịrị iji ebe ọ bụla n'etiti $ 30 na $ 200 kwa afọ na nzacha ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị naghị agbanwe ihe nzacha nzacha oge, nzacha ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma. Maka ụdị nke nhicha nke na-ejikwa akpa ma ọ bụ efere iji weghachi ihe ndị na-emerụ emerụ, ị ga-ehichapụ ihe ndị a site n'oge ruo n'oge. Ezie na ịnọgide na-enwe ụdị ikpeazụ nke ndị na-ehicha ihe dị ọnụ ala, ọ dịkwa oke ọrụ. Changingghara ịgbanwe na ihicha ihe nzacha n’oge nwere ike ime ka ikuku dị n’ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ka njọ. Ndị na-ehicha ikuku HEPA dị ọcha anaghị ewepụ isi, kemịkalụ, ma ọ bụ gas. Ihe ndị a bụ ihe pere mpe karịa oghere 0.3 micron na nzacha HEPA. Yabụ ndị na-ehicha ikuku HEPA nwere ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji banye ísì na kemịkal nke ihe HEPA na-agaghị ejide ya.
Enwere onye ọ bụla ọkachamara-ọkwa ikuku ọcha, na-adịghị eji a iyo ma ka na-anapụta oké ikuku ọcha N'ihi?
Kwa ụbọchị, azụmahịa na-atụkwasị obi na Airwoods iji nyere aka kpuchido ikuku dị n'ime ụlọ maka ndị ahịa na ndị ọrụ ha. Airwoods na-akwado teknụzụ nhichasị ahụ ọcha. Ikike iwepụ ísì ụtọ, anwụrụ ọkụ, anwụrụ ọkụ, pollen, uzuzu, VOCs, nje virus, nje, wdg. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ, ọfịs, ụlọ akwụkwọ na ebe ahụike.
Advanced Advanced Molekụla Breaking Technology:
Mgbe ikuku e metọrọ emetọ abatakwa n’ime ihe mejupụtara nke molekụla na-agbasa teknụzụ dị ọcha, ion ion ndị na-arụsi ọrụ ike nke sitere na ultra energetic pulses na isi ihe dị na ngwongwo nke ihe ndị na-emetọ emetọ, na-eme ka agbụ CC na CH nke mejupụtara agbụ nke ngwakọta nke ọtụtụ microorganisms na gas na-emebi, yabụ na-egbu microorganisms na-emerụ ahụ ka e bibiri DNA ha ma gas ndị na-emerụ ahụ dị ka Formaldehyde (HCHO) na Benzene (C6H6) gbawara na CO2 na H2O. Gbuo nje na nje virus na-egbu disinfection karịrị 99%. Jiri ire ere nicotine ma mebie ihe anwụrụ ọkụ na-emepụta ihe.
Mkpa Airwoods Air purifier na azụmaahịa ka dịtụbeghị ukwuu. Nke anyiọcha na-ebibi ihe kachasị emetọ emetọ ihe ndị na-emetọ ihe, gụnyere nje, nje bacteria, ebu, ihe ndị na-akpata ya, na kemịkal. Na anyị elu molekụla na-agbasa technology, anyị dị njikere mee taa ime ụlọ ikuku nsogbu. Pịa njikọ dị n'okpuru iji budata katalọgụ ahụ. Enwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa.
Download ngwaahịa katalọgụ
Post oge: Jan-18-2021
Kemgbe 2007, Airwoods raara nye iji nye hvac zuru oke, ime ụlọ dị ọcha yana ọgwụgwọ VOC maka ụlọ ọrụ dị iche iche. Ebumnuche anyị iji wepụta ngwaahịa ikuku dị mma na ụwa na ngwaahịa ndị na-arụ ọrụ ike, ihe ngwọta kachasị mma, ọnụ ahịa ọnụ ahịa na nnukwu ọrụ.
21lọ 2101, Isi ụlọ ọrụ Center Building No.25, Tian An Hi-Tech Ecological Park, Nke 555 Panyu Ave, Panyu District, Guangzhou, China